के शिलाजितले ‘यौ’न’ क्षमता बढाउँछ ? – List Khabar
Home / रोचक / के शिलाजितले ‘यौ’न’ क्षमता बढाउँछ ?
के शिलाजितले ‘यौ’न’ क्षमता बढाउँछ ?
admin December 7, 2021 रोचक Leaveacomment 297 Views
मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि पहाडमा पाइने बिरुवाबाट उपचार सम्भव छ ।त्यसैगरी जब यो आयुर्वेदिक विधिको माध्यमबाट यौ न स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने कुरा आउँछ, त्यसमा सबैभन्दा अघि आउँछ शिलाजित र अश्वगन्धा ।
धेरै मानिसहरु शिलाजित र अश्वगन्धालाई यौ न स्वास्थ्यमा सुधार गर्न सहयोगीको रुपमा मान्छन् । जबकि यो यौ न स्वास्थ्यको लागि मात्रै नभएर समग्र स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक मानिन्छ । कतिपयले शिलाजितलाई यौ न स्वास्थ्यसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् । शिलाजित शताब्दीयौंदेखि मानव स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
शिलाजित के हो? संस्कृतमा शिलाजित शब्दको अर्थ पर्वतको मणि भन्ने हुन्छ ।शिलाजित पत्थरबाट उत्पन्न भएको खनिज पदार्थ हो । घाम लागेर भएको प्रचण्ड गर्मीका कारण पहाडको धातुकाे भाग पग्लिएर पहाडबाट बाहिर निस्किएको पदार्थ नै शिलाजित हो ।त्यो तरल शिलाजित सुकेपछि चम्किलो ढुंगा जस्तै देखिन्छ । यही पदार्थ मान्छेको प्रजनन क्षमता बढाउन उपयोगी मानिन्छ ।
शिलाजितका अन्य कामहरु:
दिमागी कार्यको बढावा
शिलाजितमा पाइने कैयौं पदार्थले दिमागको प्रणाली सुधारको लागि सहयोग गर्ने गर्छ । कतिपयले यसलाई अल्जाइमर थेरापीमा पनि सहायक रहेको मान्छन् ।इन्टरनेशनल जर्नल अफ अल्जाइमर डिजिजको एक अध्ययनमा भनिएको छ कि शिलाजितको उपयोग उमेर बढ्ने प्रक्रियालाई कम गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ ।फुल्विक एसिड शिलाजितको प्रमुख यौगिक हो, जसले रगत शुद्ध गर्न सहयोग गर्छ ।
शिलाजितको उपभोगले क्यान्सर कोषसँग ल ड्न पनि मद्दत गर्छ । एक अनुसन्धानले पत्ता लगाए अनुसार शिलाजितले कलेजोको क्यान्सरमा कमी ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।शिलाजितले क्यान्सर कोषिकाहरुको वृद्धि रोक्छ र उनीहरुलाई नष्ट पनि गर्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुले शिलाजितमा क्यान्सर प्रतिरोधी पदार्थ भेटिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ ।
एथ्नोग्राफी जर्नलमा प्रकाशित २०१२ को एक अध्ययनअनुसार शिलाजितको प्रयोगले थकान जस्ता मानसिक कमजोरीको अवस्था कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने पुष्टि भएको थियो ।अध्ययनबाट यो पनि पुष्टि भएको छ कि शिलाजितको उपभोगले शरीरमा हुने विभिन्न कोषिकाले राम्रो काम गर्न मद्दत गर्छ । यसले तपाईंको शरीरमा ऊर्जा बढाउँछ र थकान कम गर्छ ।
– शिलाजित सेवन गरेको समयमा जलन हुने खालको भोजन गर्नु हुँदैन । साथै धेरै खानेकुरा समेत खानु हुँदैन । – शिलाजित त्यस व्यक्तिले गर्नु हुँदैन, जसको यूरिक ए सिड बढेको छ ।
– शिलाजित धेरै सेवन गर्नु हानीकारक हुन्छ । यसले एलर्जी हुन्छ । – गर्भावस्थामा शिलाजित सेवन गर्नु हुँदैन ।
Previous २ जनालाई ओमिक्रोन फेला परेपछि लकडाउनको बारेमा आयो अत्यन्तै जरुरी सूचना
Next आजदेखि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय